Man City oo iska xaadirisay wareegga siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay ka adkaatay Real Madrid… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 07 Agoosto 2020. Manchester City ayaa u soo baxday wareegga Siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay Real Madrid 2-1, kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka, taasoo ka dhigan in cel-celis ahaan labada kulan ee wareegan ay ku soo baxday goolal gaarsiisan 4-2.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Manchester City iyo Real Madrid.
Daqiiqadii 9-aad Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Raheem Sterling, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Gabriel Jesus.
Laakiin daqiiqadii 28-aad Real Madrid ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Karim Benzema, xilli uu goolkan ka caawiyay da’ayarka reer Brazil ee Rodrygo.
Daqiiadii 68-aad kooxda Manchester City ayaa markale hoggaanka u qabatay dheesha, waxaana 2-1 ka dhigay weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 ay kaga adkaatay Manchester City kooxda Real Madrid oo marti ugu aheyd garoonka Etihad, Sky Blue ayaana sidaas isaga xaadirisay wareegga Siddeeda ee tartanka UEFA Champions League.